Askarigii Mareykanka ee sida Cunsuriyadda ah u dilay George Floyd oo lagu xukumay 22 sano - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Askarigii Mareykanka ee sida Cunsuriyadda ah u dilay George Floyd oo lagu xukumay 22 sano
Maxkamad ku taalla dalka Mareykanka ayaa xabsi ku xukuntay Askarigii Caddaanka ahaa ee sida arxan-darrada ah u dilay ninkii Madowga ka tirsanaa ee ee George Floyd.
Askarigan Derek Chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsan Booliska ayaa lagu helay dambiga dilkii George Floyd oo ee dhaliyey banaanbaxyada gilgilay dunida oo dhan, kaasoo ka dhacay magaalada Minneapolis eedalka Mareykanka.
Maxkamadda degmada Hennepin ee gobolka Minnesota ayaa askariga dilka geystayku xukuntey 270 bilood oo u dhiganta 22 sano iyo bar oo xabsi ah.
Previous articleNin Somali ah oo Weerar Mindi loo adeegsaday ku qaaday Dad ku sugnaa magaalo ku taalla Germany..
Next articleMuuse Biixi: “Waa Gardarro iyo meel ka dhaca ugu weyn in Xamar laga xuso 26-ka June..”